मलाई सुलेमानी नबनाइयोस् महाराज !
रहमान गज्जवको योद्धा थियो ! उसको तरवार बिजुलिको गतिमा चल्थ्यो र जोसुकै पनि उसको तरवारसँग काँप्थे ! एक दिन समुन्द्री किनारको आकस्मिक लडाईमा उ पराजित भयो। उसका हातखुट्टामा सिक्री बाँधियो र मरुभूमिमा लडाईयो। बिजेता देशको राजा चाहन्थे उ दास बनोस, अब्बल दास ! जो आफैलाई विर्साेस र मात्र मालिकको आदेशको तामेल गरोस्।
यसका लागि रहमानमाथि गज्जबको तरिका अपनाईयो। अगाडिका सबै कुरा बिर्साउनका लागि रहमानलाई हात खुट्टा बाँधेर मरुभूमिको चर्काे घाममा लडाईयो। उसको कपाल मुण्डन गरियो र आलो सुत्केरी उँटको कल्चौडो काटेर ल्याईयो। सुत्केरी उटको कल्चौडोको छाला बेस्सरी तन्काएर रहमानको टाउकोमा टाँस्सियो अनि फेरि घाममा लडाईयो।
टाउकोमा टास्सिएको उटको छाला बिस्तारै सुक्न थाल्यो। छाला जति सुक्थ्यो पीडा उति नै थपिन्थ्यो। छालाले टाउको कस्तै लग्यो र त्यो टाउको अठ्याउने एक भड्डु जस्तै बन्यो। समयसंगै टाउकोका रौहरु बढन थाले। तर तिनिहरु बाहिरिने ठाउँ थिएन त्यस कारण रौहरु पलाएकै दिशातर्फ नै सोझ्झिए। हजारौं मसिना रौहरु आफ्नै टाउकाको छाला छेडेर भित्र पस्न थालेपछि रहमान छिन छिनमै बेहोस हुन थाल्यो उ रुन्थ्यो कराउथ्यो र भन्थ्यो मलाई काट। टुक्रा टुक्रा पार र सक। तर यसो नगर ,अनि फेरि बेहोस हुन्थ्यो ! रहमान एक दिनभरि बेहोस भो बेलुकि उसको टाउकामा चढाईएको उँटको छाला निकालियो र तिमी कोहौ भनेर सोधियो। तर उसैले सोध्यो म को हुँ ? राजाले भने तिमी यो देशका योद्धा हौ र तिम्रो नाम सुलेमान हो ! उस्ले राजाको चरण छोयो र खुब रोयो।
लडाईमा उसकी आमा पनि समातिएकी थिइन्। उनलाई चौपाय हेर्ने दास बनाईएको थियो। जो समुन्द्री किनार छेउ पशुहरु हेर्दै थिइन्। राजा सुलेमानलाई लिएर समुन्द्री किनार तिर जाँदै गर्दा राजाले सुलेमानकी आमा देखेर रथ रोके। सुलेमानलाई राजाले भने “सुलेमान मेरो राज्यमा एक बोक्सीले गर्दा भोकमरिको संभावना बढेको छ के तिमी त्यसको टाउको ल्याउन सक्छौ।
‘सुलेमानले भन्यो ‘हुकुम होस सरकार ! ‘ राजाले हुकुम गरे ! सुलेमान रथबाट ओर्लियो र आफ्नी आमा भएको ठाँउमा पुग्यो ! आमा उसलाई अंकमाल गर्न खोज्दै थिईन तर सुलेमानले बिजुली गतिमा तरबार घुमायो र आमाको टाउको शरिरबाट अलग गरिदियो। महाराज !! मलाई सुलेमान नबनाईबक्स्योस ! म यो पाप गर्न सक्दिन !!! मलाई मेरो पार्टी सग्लै चाहिन्छ ।
कस्ताे अवस्थामा पड्किन्छ ग्याँस सिलिण्डर ?
ओलीले अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका प्रदीप नेपालको टिप्पणीः ‘नेपालमा गणतन्त्र आवश्यक थिएन’
ओलीलाई प्रचण्डको कडा चेतावनी : मेरो प्रस्तावमा छलफल हुँदैन भन्ने तपाईं को ?
ओलीलाई प्रचण्डको जवाफ : ‘कुन प्रस्ताव ठिक भन्ने कुरा कमिटीले निर्णय गर्नेछ’
पत्रकारमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा अपमान (भिडियोसहित)
अब राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने सोँच नराखे हुन्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
विवाह गर्दै प्रखर वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाई
नेपालले भविष्यको विकासको लागि भारत र चीनसँग फाईदा लिनुपर्छ : डा. महत
रोल्पामा ३३/११ केभीको लाँकुरी शवस्टेशन चार्ज
नेकपा बैठक : अध्यक्षद्वयको ‘प्रस्ताव’माथि छलफल प्रारम्भ
महासंघको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा , चन्द्र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अब नेकपामा के होला ?
सातै प्रदेशमा एकै साथ ३ सय ९६ अस्पतालको शिलान्यास गरिँदै
कोरोना त्रासले अस्पतालमा प्रसूति गराउने घटे !
देशभर चिसो बढ्यो, काठमाडौंको तापक्रम ५.४ डिग्री
ओलीको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्दैन : प्रभु साह
‘ओली-प्रचण्ड नमिले मुलुकमा विदेशी चलखेल बढ्छ’